U-Forbes ngumagazini odumile waseMelika. Iindawo eziphambili zizoqoqosho, ezezimali kunye nezopolitiko. Kwimpapasho ye-Forbes unokufumana ukuhlaziywa kweeprojekthi ezithembisayo kunye nemveliso yazo; ukuphononongwa kweeprojekthi ezingaphumeleli kunye nezizathu zokungaphumeleli kwazo; imbali ebomini babantu abadumileyo nabanamandla; iindaba ezinxulumene nobubanzi bemisebenzi yazo kunye nokuzonwabisa; ukuphononongwa kweziganeko ezivakalayo kunye neziganeko; izilinganiso zabantu abacebileyo behlabathi; Iindwendwe eziphezulu kakhulu zeenkwenkwezi zokubonisa: abadlali, abagijimi, imizekelo, ababukeli beTV. Ngo-Apreli 2004, umqulu wokuqala weForbes washicilelwa eRussia. Saba sisihlanu kwilizwe lehlabathi ukupapasha umagazini malunga nabantu abadumileyo nabatyebi. Ngoko ke ziphi iinkwenkwezi ezicebileyo zaseRashiya ezibonisa ishishini? Siza kufumana namhlanje!
Ngokomagazini weForbes, abameli abatyebileyo bezorhwebo beRussia ngabaqeqeshi abadumileyo uEdgard no-Askold Zapashny. Isimo sabo sele sifike kwii-6 ezigidi. Nangona ixabiso eliyingqungquthela elalifunyenwe ngabazalwana bobabini, kwaye kungekhona ngomnye wabo, ukuphumelela okunjalo kunokuthiwa yimpumelelo kwishishini lasekhaya leeskimu, ekuye kwimihla yamva nje, ukuyibeka ngokukhawuleza, kungekhona ekuphakameni kwee-circus. Kuhlala kuphela ukuvuyisana nabaqeqeshi abadumileyo. Ienkwenkwezi zabo ezizityebi kunye nabazali bexesha elide banokuziqhayisa ngoonyana abanetalente, abaphumelele kwindwendwe edumileyo yeesksi!
Indawo yesibini ekulinganisweni "I-Forbes" yayingasalindelekanga iGrigory Leps. Ngo-2011, umculi wakwazi ukwandisa umthamo wakhe kwi-$ 5 yezigidi, u-Alla Pugacheva, owayengumfazi wakhe owayengumfazi uFiliphu Kirkorov kunye nentando yakhe yangoku "iDava" - uMaxim Galkin. Impumelelo enjalo ingachazwa ngenani elikhulu labalandeli bomculi. I-Grigory Leps ihlala iphula iirekhodi zeqela labaphulaphuli kwiikonkethi kunye nokuthengiswa kwerekhodi zayo. Ubuntu bobugcisa bokuvelisa bamlethela abaphulaphuli abahlala bebala, okokuphela konyaka kuzaliswa kuphela.
Kwindawo yesithathu kwiluhlu lwabantu abacebileyo bezorhwebo beRussia, mhlawumbi umculi onyantyantle wezabelo zasekhaya - uFilip Kirkorov - uyindawo ethembekileyo. Emva koko, kuyo yonke into eyaziwayo "i-pink blouse" kunye nomtya weentlanzi ezincinci, umlingane owayengumlingani "u-Prima Donna" waphinde wazihlukanisa. Phakathi kokuhlaziywa kweGreen Gramophone uFilipu Bedrosovich wabetha umlawuli we-show-Marina Yablokov. Kodwa konke oku akuzange kumise, kwaye mhlawumbi uncedise, ukufumana iKirikorov phantse iidola ezingama-5.
Umncinci omncinci, okungukuthi, i-4, 7 yezigidigidi zeedola zamkela uMaxim Galkin, uthatha indawo yesine kwi-Russian "Forbes". UMaxim unomsebenzi omkhulu kule "mpu mshelwano" kunye no-Alla Borisovna, ongeyena kuphela umfazi womntu, kodwa naye unomsebenzi womsebenzi womfana omncinane. Ngakolunye uhlangothi, ukuba uGalkin wayengekho umbonisi weTV, umculi, umculi kunye nomdlali, kuya kuba nzima kuye ukuba athathe ihafu yesimo sakhe samanje.
Indawo yesihlanu ihlala "i-Primadonna". Kule meko, izimvo zingaphezulu. Kuya kumangalisa ukuba uAlla Pugacheva akazange angene kwiinkwenkwezi ezilishumi eziphezulu kakhulu zeRashiya, apho ebambe iminyaka emininzi kwaye akabonakali ukuba ahambe kwiminyaka ezayo. Isimo sakhe si-4, 5 yezigidi.
Kwindawo yesithandathu kwinqanaba lephepha elithi "Forbes", phakathi kweentlanga ezicebileyo eRussia, yayinguTimur Bekmambetov. Umenzi wefilimu onetalente, umenzi womculo kunye nomvelisi sele sele wangena kwiintlanu eziphezulu zefilimu. Ifilimu yakhe "Ngokukodwa ingozi" kunye no-Angelina Jolie kwindlalifa yeqonga eqokelelelwe ngaphezu kwezigidi ezili-84 zeedola kwaye yazisa uTimur Bekmambetov ukuqatshelwa kwehlabathi. Ukufumana i-$ 4 yezigidi, umlawuli naye wancedwa ngamafilimu akhe adumile: i-Night Watch, i-Day Watch, i-Irony yeFate. Ukuqhubela phambili "," Imithi ye-Fur ". I-Timur Bekmambetov inamathuba onke okunyuka phezulu kwi-Forbes ngonyaka ozayo.
Indawo yesikhombisa kwiintloko ezilishumi ezicebileyo zasekhaya zasekhaya zaya kuDima Bilan. Ophumeleleyo "we-Eurovision-2008" wathola i-3, 7 yezigidigidi zeedola. Ukongeza kwimiba entsha yesiNgesi, u-Dima uyaqhubeka ukubonisa ezinye iinkathazo kubalandeli bakhe. Kungekudala, umculi wavuma ukuba umtshato osindelwe ixesha elide labaninzi abalandeli kunye neentatheli kunye noLena Kuletskaya kwakungekho nto ngaphandle kweprogram ye-PR eyakhiwe ngumvelisi oqaqambileyo u-Yana Rudkovskaya. Ngoko isitatimende seDima sokuba ukuba unqoba i-Eurovision Song Contest 2008, umzekelo ophumelelayo kaLena uza kuba ngumfazi wakhe, kwaye uhlala nje kuphela. Kwaye ngokwenene: yintoni ongenakuyicinga ngaphambi kokuba kubekho isiganeko esinjalo!
Indawo yesibhozo kwindawo yokulinganisa i-Nikolai Baskov. Kungekudala, uNicholas akagcini nje ngokucula kwiimidlalo kunye namacandelo amaqumrhu, kodwa kwakhona ngumqhubi weTV weenkqubo zokuzonwabisa kunye neekonsathi. Kuze kube yimini, i-fortune ye-singer ibingama-3.6 yezigidi. Kungakhathaliseki ukuba u-Nicholas waprofetha njani ngaphandle kokuqhawula umtshato kaSvetlana Der Spiegel, oku akuzange kwenzeke.
Indawo yesishiyagalolunye ngumculi othandekayo uValeria. Kwiminyaka emininzi, ngelizwi lakhe eliyingqayizivele kunye nokubonakala okumangalisayo, unina kunye nabantwana abathathu bayonwabile kunye nabalandeli bakhe kunye nomfazi onetalente. I-Valeria yathola i-3, 5 yezigidigidi zeedola.
Ngaphantsi kwezona "zizityebi ezilishumi" zahlala kwindawo "yasebusuku" kwinqanaba lasekhaya - Valery Meladze. Eyona nto intle kakhulu - inkunzi-mali yomculi yi-3, 2 yezigidigidi zeedola.
Ngo-2011, iinkwenkwezi ezilishumi ezicebileyo zorhwebo zaseRussia azibandakanyi: uKsenia Sobchak, uMaria Sharapova, uNatalika Vodyanova kunye neqela leMumiy Troll.
Umqambi omkhulu uAlexander McQueen
Iinkwenkwezi zaseRashiya ngaphandle kweeNgceke
Izimfihlo zeMpilo zikaJulia Bordovskih
UGeorge Zhzhenov: i-biography
UCarmen Electra: uthando oluhamba phambili
INkosana William kunye no Kate: Umtshato
Iinkwenkwezi zorhwebo ezibiza kakhulu
Indlela yokwenza iholide ekhaya
Ukuzilolonga ngokomzimba emva kokubeletha
Indlela yokwenza ngokukhawuleza nokukhawuleza umntu?
Amanyathelo alula ekuqeqesheni
Yintoni enxibayo kunye nendlela yokuhlangabezana nomnyaka omtsha ka-2010?
Umsila waseBolognese ekhaya: iresiphi ngesithombe esivela kubapheki baseNtaliyane
Ukuva unyango ngamayeza emveli
UMarc Jacobs uvala enye yeemveliso zakhe
Iimfihlelo ze-"brilliant" make-up: indlela yokukhanya kakuhle
Iinqhathi ziza kuba: iinqanawa ezincinci zentsana zika-2016
Ukuphululwa kwamalungelo wabasetyhini abakhulelweyo
I-rice pudding yase-Iceland
Ungayikhulula njani intloko yakho ukusuka kwi-migraine kwiitempile zakho?